Pandaw Cruises Zvino Yakavharwa Bhizinesi Nezvakanaka Nekuda kweCOVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Pandaw Cruises Zvino Yakavharwa Bhizinesi Nezvakanaka Nekuda kweCOVID-19
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Cambodia Kuputsa Nhau • Kurwisa • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • Laos Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Vietnam Kuputsa Nhau
Zvakanaka kune Pandaw Cruises
Pandaw yakazivisa nhasi, Gumiguru 26, 2021, kuti nekuda kwekuenderera mberi kweCCIDID-19 pakufamba kwevaraidzo yepasirese, inofanirwa kuvhara mikova yayo.
Nzvimbo dzinoitirwa rwendo rwekufamba muVietnam, Cambodia, Laos, neIndia dzamira.
Mamiriro ezvinhu akaoma ezvematongerwo enyika muMyanmar akabatsirawo pakuvhara.
Kambani iyi haina imwe nzira kunze kwekumisa basa rayo rekufamba nerwizi nekuda kwekushaikwa kwemari uye kutadza kuwana imwe mari nekuda kwedambudziko reCOVID-19.
Kunyangwe kubhuka kumberi kwekutangazve muna 2022 kwakaramba kwakasimba, nerutsigiro rwakakura kubva kunharaunda yakavimbika yePandaw, kambani inoshaya mari yekuenderera mberi nekugadzirisa ngarava dzavo gumi nenomwe kwerimwe gore, vobva vagadziridza kwakakosha kugadzirira mashandiro matsva, iyo nguva isina chokwadi, kunyangwe tichifunga kuti izvi zvinogona kuitika mumwaka wechando 2022/23.
Iyo kambani yakashanda nesimba mugore rapfuura kutsvaga vatengesi vatsva kana mamwe marudzi emari kuti atakure kambani kuburikidza, asi pasina kubudirira.
Yakatangwa muna 1995, Pandaw yakapayona nzendo dzerwizi muVietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, neIndia nengarava dzayo dzemaboutique. Kusvika pakukanganisa kweCCIDID, Pandaw anga anakidzwa nerutsigiro rwekutevera kwakavimbika kwevafambi, kugara kwakakwirira, uye gore negore mari inokura ine mibairo yakanaka yemari.
Muvambi wePandaw Paul Strachan akati: “Iyi inguva inosiririsa zvikuru kwandiri, mhuri yangu, vashandi vedu, uye vatengi. Zvinoratidza kuguma kwenguva kwatiri tese mushure memakore makumi maviri nemashanu echiitiko chaicho. Tine hurombo zvechokwadi kuodza mwoyo vafambi vedu venguva dzose vanga vachitarisira kuita rwendo mushure mekubviswa kwezvirambidzo zvekufamba. Isu takarwadziswawo nenhengo dzedu dze25+ nevashandi vekumahombekombe vakamira paPandaw uye vaitarisira kuenda zvakare gore rinouya. "
Pasinei nekuvharwa kwe Pandaw Cruises, Pandaw Charity, iyo yakaita zvakawanda kutsigira vanhu Myanmar panguva yedambudziko ririkuitika ikoko, ichaenderera mberi nebasa rayo ichitungamirirwa nevatariri vayo.